batisa Archives - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Étiquette : batisa
28 novembre 2011 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Mbola mitohy hatrany ny famaranana ny fampianarana ny boky Apokalypsy ataon’ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara. Ny Sabata 26 Novambra lasa teo dia tany Tsiroanomandidy indray no nanatontosana izany. Famaranana izay niarahana tamin’ny Ray aman-dReny pasiteraContinue reading
13 novembre 2011 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Ny Sabata faha 12 Novambra 2011 lasa teo no notanterahina tetsy Andranotapahina Ambohidratrimo ny batisa lehibe izay niarahana tamin’ny Fiangonana Apokalypsy rezionaly Antananarivo notarihin’ny Pasitera Mailhol. Tao aorian’ny kaoferansa izay niarahana tamin’ny pasitera Mailhol diaContinue reading
17 octobre 2011 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Batisa tao mahanoroNanamarika ny sabata 15 Oktobra 2011 lasa teo ny famaranana ny fampianarana Apokalypsy izay notontosaina tany Mahanoro. 135 no olona niroso tamin’ny ranon’ny batisa tamin’izany, izay marihina fa niarahana tamin’ny filoha iraisam-pirenen’ny fiangonanaContinue reading
12 mars 2011 adminIreo Vaovao, Vaovao Samihafa
Famaranana Apokalypsy Marovoay
Tao aorian’i Mahajanga dia nihazo ny faritra Marovoay ny filohan’ny Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara dia ny Ray aman-dReny Pasitera Mailhol mivady, ity no fitsidihana voalohany notanterahiny tao Marovoay tamin’ity taona 2011 ity. Ny alakamisy fahaContinue reading